Vaovao - Vokatra vaovao novolavolaina
Varingam-pamaky kodiarana Daihatsu 47550-87304, 47560-87302, 47570-87304, 47580-87302,47510-87304, 47520-87301, 47530-87304, 47540-87301 ary cylindre master 31410-87322 novolavolaina nandritra ny volana septambra 2020. Daihatsu dia faritra marika vaovao ho antsika, tena tsara.
Ny maha-zava-dehibe ny fampiroboroboana vokatra vaovao dia vokatry ny filàna fampandrosoana ny vokatra vaovao raha te hahomby ny orinasa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fampivoarana ny vokatra vaovao dia mifamatotra amin'ny fahafahan'ny orinasa iray mijanona ho mpifaninana ary koa amin'ny faharetan'ny orinasa toy izany. Ny orinasa rehetra izay tsy mahatsapa ny maha-zava-dehibe ny fampiroboroboana vokatra vaovao dia tsy haharitra ela loatra satria vokatry ny zava-misy fa ny fihariana dia ny fanavaozana sy ny fanovana avokoa, ka tena ilaina tokoa ny mampifanaraka ny asa aman-draharaha amin'ireo orinasa ireo mba hitazomana hatrany. Ny fampiroboroboana ny vokatra vaovao dia mety hifantoka amin'ny famolavolana hevitra vaovao momba ny làlan'ny vokatra vaovao tsy eo an-tsena ankehitriny, na mety hikendry ny fanavaozana ireo vokatra izay mety efa eny an-tsena sahady. Na izany na tsy izany, ny fampandrosoana ny vokatra vaovao dia ampahany lehibe amin'ny fampiharana ny paikadin'ny orinasa ataon'ny orinasa.
Ny fanehoana ny maha-zava-dehibe ny fampiroboroboana vokatra vaovao dia azo jerena amin'ny sehatry ny fifindrana avy amin'ny boky ara-batana mankany amin'ny e-boky. Ny orinasa sasany izay nanangana ny lazany ary na ny orinasany iray manontolo amin'ny fivarotana boky ara-batana aza dia nakoropaka haingana noho ny tsy fahitany ny maha-zava-dehibe ny fampiroboroboana vokatra vaovao. Ireo orinasa ireo dia tsy naharaka ny fiovan'ny faritra hafa amin'ny tsena, toy ny fanavaozana ny haitao izay nahatonga azy ireo ho mora kokoa amin'ny olona ny mampidina boky amin'ny fitaovana fa tsy mividy ilay boky ara-nofo. Ny orinasa hafa izay nandray ny fivoaran'ny vokatra vaovao dia niandrandra izany fanovana izany ary tsy vitan'ny nahafahan'ny mpanjifa misintona boky avy amin'ny tranokalan'izy ireo, fa koa nampiditra an'io fampidinana io tamin'ny mpamaky elektronika azy manokana, ka lasa fonosana feno. Ity fahatakarana ny maha-zava-dehibe ny fampiroboroboana vokatra vaovao ity dia nahatonga ny orinasa toy izany hanana fifandraisana na dia eo aza ny fanavaozana hatrany ny haitao sy ny tsiro na ny tian'ny mpanjifa. Fanehoana iray hafa momba ny maha-zava-dehibe ny fampiroboroboana vokatra vaovao dia ny sehatry ny finday marani-tsaina izay nahitan'ny orinasa sasany nametraka ny tenany ho mpitarika tsena noho izy ireo mitarika hatrany amin'ny vokatra vaovao. Ny orinasa toy izany dia mahita vokatra vaovao matetika, mandanjalanja tsara rehefa ny vokatra any an-tsena dia efa mahatratra ny faran'ny andiam-piainan'ny vokatra. Amin'ny alàlan'ny fanoloana ireo vokatra efa tonta amin'ny vokatra vaovao, dia azon'izy ireo atao ny mitazona ny tombotsoan'ny mpanjifa sy manao izay mahamety ny vokatra sy ny orinasan'izy ireo.